DHEGEYSO-Dood ku saabsan tahriibka dhalinyarada Soomaaliyeed. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Dood ku saabsan tahriibka dhalinyarada Soomaaliyeed.
Nofeembar 2, 2016 2:38 b 0
Kismaayo, Novb 02 2016-Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aad usoo badanayey qulqulka tahriibta ee dhalinyarada ay ugu safrayaan wadamada shisheeye gaar ahaan yurub si aan nolol tooda ka wanaagsan ay uga helaan.
Waxaana inta dhalinyarada ay kusii jiraan wadada ay la kulmaan dhibaatooyin baddan oo noloshooda saameeya.
HAdaba maxaa keena safaradaas tahriibta sideese looga hortagi karaa, dood arimahaas ku saabsan ayaa wariyaheena Amina ladan axmed waxay dhex dhigtay qaar kamid ah dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha muqdisho ee haatan ka qeybgalaya soo xulida xildhibaanada parlamaanka ee soo socda kuwaasoo ku sugan magaalada kismaayo.
Imaaraadka oo Puntland iyo Galmudug ku heshiisiiyey inay wada heshiiyaan.
DHEGEYSO-Wasiirka ganacsiga Puntland oo kahadlay shir Garoowe ka furmay.